အသက်(၁၇)နှစ်နဲ့ ယောကျာ်းစွန့်ပစ်တာခံရတဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ (၄၅)ရက်အရွယ် သားလေးကို ခေါ်ယူမွေးစားခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ – Suehninsi
အသက်(၁၇)နှစ်နဲ့ ယောကျာ်းစွန့်ပစ်တာခံရတဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ (၄၅)ရက်အရွယ် သားလေးကို ခေါ်ယူမွေးစားခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
Sue | June 7, 2020 | ရသစုံ | No Comments
နိုင်ငံကျော် အနုပညာရှင်၊ ပရဟိတသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေက သူမရဲ့ဘဝကို အများအကျိုးကို သယ်ပိုးရင်းနဲ့ပဲ ဖြတ်သန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေက လူမှုအကျိုးပြုပ ရဟိတအသင်းအပြင် “ခိုင်နှင်းဝေရင်သွေးလေးများဂေဟာ” ကိုလည်း တည်ထောင်ထားပြီး မိဘနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့ ကလေးလေးတွေကို သားသမီးအရင်းတွေလို ပြုစုစောင့်ရှောက်နေသူ
တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်း ခိုင်နှင်းဝေက (၄၅) ရက်သားအရွယ်ရှိတဲ့ သားသားေ လးတစ်ယောက်ကို ခေါ်ယူမွေးစားဖြစ်ကြောင်း အခုလိုပဲ ပြောပြထားပါတယ် “Hello! ခိုင်နှင်းဝေပရဟိတဂေဟာကပါလား????? ကျမ ကလေးပေးချင်လို့ပါ စတဲ့ ဖုန်းပေါင်း များစွာကို ဖြေနေရတဲ့ ကျွန်မ။ ကလေး ၃၀ ယောက် နဲ့ သူတို့ကိုထိန်းတဲ့ ဆရာမလေးတွေ
ပြည့်နေတဲ့ဂေဟာ နေရာ‌ကျဉ်းလေးကို တလှည့် ၊ ‌ကမ္ဘာကပ်ရောဂါကြောင့် အလှူရှင်နည်းပါး သွားလို့ လျော့သထက်လျော့ လာတဲ့ နို့မှုန့်ဘူးတွေကို တလှည့် စီ ကြည့်ရင်း မလွန်ဆန်နိုင်ပဲ ငြင်းပယ်လိုက်ရတဲ့ ဖုန်းတွေကြားထဲကမှ ဒီနေ့ ကျမနှလုံးသားရဲ့ ဆန္ဒကို မလွန်ဆန်နိုင်ပဲ ကလေးတယောက်ကို ခိုင်နှင်းဝေ ရင်သွေးလေးများဂေဟာသို့ ကျွန်မကိုယ်တိုင် ခေါ်လာခဲ့ ပြန်ပါပြီရှင်” “အမေက (၁၇)နှစ်၊ အဖေက
ပထမအိမ်ထောင်ရှိနေလို့ နို့မှုန့်ဖိုးတောင် မထောက်ပံ့ဖူးငြင်းလွှတ်၊ အဘွားဖြစ်သူက ကင်ဆာရောဂါသည်မို့ ဒီ ၄၅ရက်သား ဗုဒ္ဓဟူးသားလေးကို ကျွန်မရဲ့ ရင်ခွင်ဆီ ကို ဘုရားက လက်ဆောင်ပို့ပေးလိုက်လေသလားလို့ တွေးမိလိုက်ခြင်းမှာပဲ သားငယ်လေးက ကျွန်မမျက်နှာကိုကြည့်ပြီး ပြုံးပြလေရဲ့ ❤️❤️သားငယ်လေးကို ခေါ်လာပြီး သားလေးဖွား ဖွား အတွက်
ဆန်နဲ့ဆီလဲ လှူခဲ့သေးတယ်နော်။ မေတ္တာတရားရဲ့ဓာတ်ကို အသက်ငယ်ပေမယ့် နားလည်နိုင်တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးသားလေးကို အမေ နာမည်ပေးဖို့ စဉ်းစားလိုက်ပါဦးမယ် သားလေးရေ” ဆိုပြီး ပြောထားပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေကတော့ သံယောဇဉ်တွေကို သူမကိုယ်တိုင်ထပ်ရှာရင်း အခုလည်း သံယောဇဉ်ကြိုးေ လးတစ်မျှင်နဲ့ ရစ်ပတ်နေမိပြန်ပါပြီ။ သားသားလေးလည်း ခိုင်နှင်းဝေရဲ့လက်ထဲမှာ ကောင်းမွ န်စွာကြီးပြင်းပြီး တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် အကျိုးပြုနိုင်မှာ သေချာပါတယ်။
နိုငျငံကြျော အနုပညာရှငျ၊ ပရဟိတသမားတဈယောကျဖွဈတဲ့ ခိုငျနှငျးဝကေ သူမရဲ့ဘဝကို အမြားအကြိုးကို သယျပိုးရငျးနဲ့ပဲ ဖွတျသနျးနတောဖွဈပါတယျ။ ခိုငျနှငျးဝကေ လူမှုအကြိုးပွုပ ရဟိတအသငျးအပွငျ “ခိုငျနှငျးဝရေငျသှေးလေးမြားဂဟော” ကိုလညျး တညျထောငျထားပွီး မိဘနဲ့ဝေးကှာနတေဲ့ ကလေးလေးတှကေို သားသမီးအရငျးတှလေို ပွုစုစောငျ့ရှောကျနသေူ
တဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာလညျး ခိုငျနှငျးဝကေ (၄၅) ရကျသားအရှယျရှိတဲ့ သားသားေ လးတဈယောကျကို ချေါယူမှေးစားဖွဈကွောငျး အခုလိုပဲ ပွောပွထားပါတယျ “Hello! ခိုငျနှငျးဝပေရဟိတဂဟောကပါလား????? ကမြ ကလေးပေးခငျြလို့ပါ စတဲ့ ဖုနျးပေါငျး မြားစှာကို ဖွနေရေတဲ့ ကြှနျမ။ ကလေး ၃၀ ယောကျ နဲ့ သူတို့ကိုထိနျးတဲ့ ဆရာမလေးတှေ
ပွညျ့နတေဲ့ဂဟော နရော‌ကဉျြးလေးကို တလှညျ့ ၊ ‌ကမ်ဘာကပျရောဂါကွောငျ့ အလှူရှငျနညျးပါး သှားလို့ လြော့သထကျလြော့ လာတဲ့ နို့မှုနျ့ဘူးတှကေို တလှညျ့ စီ ကွညျ့ရငျး မလှနျဆနျနိုငျပဲ ငွငျးပယျလိုကျရတဲ့ ဖုနျးတှကွေားထဲကမှ ဒီနေ့ ကမြနှလုံးသားရဲ့ ဆန်ဒကို မလှနျဆနျနိုငျပဲ ကလေးတယောကျကို ခိုငျနှငျးဝေ ရငျသှေးလေးမြားဂဟောသို့ ကြှနျမကိုယျတိုငျ ချေါလာခဲ့ ပွနျပါပွီရှငျ” “အမကေ (၁၇)နှဈ၊ အဖကေ
ပထမအိမျထောငျရှိနလေို့ နို့မှုနျ့ဖိုးတောငျ မထောကျပံ့ဖူးငွငျးလှတျ၊ အဘှားဖွဈသူက ကငျဆာရောဂါသညျမို့ ဒီ ၄၅ရကျသား ဗုဒ်ဓဟူးသားလေးကို ကြှနျမရဲ့ ရငျခှငျဆီ ကို ဘုရားက လကျဆောငျပို့ပေးလိုကျလသေလားလို့ တှေးမိလိုကျခွငျးမှာပဲ သားငယျလေးက ကြှနျမမကျြနှာကိုကွညျ့ပွီး ပွုံးပွလရေဲ့ ❤️❤️သားငယျလေးကို ချေါလာပွီး သားလေးဖှား ဖှား အတှကျ
ဆနျနဲ့ဆီလဲ လှူခဲ့သေးတယျနျော။ မတ်ေတာတရားရဲ့ဓာတျကို အသကျငယျပမေယျ့ နားလညျနိုငျတဲ့ ဗုဒ်ဓဟူးသားလေးကို အမေ နာမညျပေးဖို့ စဉျးစားလိုကျပါဦးမယျ သားလေးရေ” ဆိုပွီး ပွောထားပါတယျ။ ခိုငျနှငျးဝကေတော့ သံယောဇဉျတှကေို သူမကိုယျတိုငျထပျရှာရငျး အခုလညျး သံယောဇဉျကွိုးေ လးတဈမြှငျနဲ့ ရဈပတျနမေိပွနျပါပွီ။ သားသားလေးလညျး ခိုငျနှငျးဝရေဲ့လကျထဲမှာ ကောငျးမှ နျစှာကွီးပွငျးပွီး တိုငျးပွညျနဲ့ လူမြိုးအတှကျ အကြိုးပွုနိုငျမှာ သခြောပါတယျ။
အလုပ်ရှားပါးနေတဲ့ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်ကြီးတွေကို ကြော်ငြာရိုက်ဖို့ လက်တွဲခေါ်ပြီး ထမင်းကျွေးကာ ကန်တော့ခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေး
မရှိလို့ မလှူတယ်ဆိုတာမျိုး မဖြစ်ရအောင် ဒီရက်ပိုင်း အလှူတွေဆက်တိုက် လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ ကော်နီ
The Voice Myanmar ပြိုင်ပွဲဝင် ခင်ရတနာစိုးက မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ကမ္ဘာကသိအောင် ချပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူ ချီးကျူးခဲ့တဲ့ ဖိုးချစ်
ထက်ထက်မိုးဦး အွန်လိုင်းမှာ ဈေးရောင်းတာကို ကြည့်ရင်း ကံကောင်းစွာနဲ့ ကံစမ်းမဲပေါက်ခဲ့လို့ အရမ်းပျော်နေတဲ့ အိအိတုန်